Kubika nyama yetsuro yakasasikwa ine dovi | Kwayedza
Kubika nyama yetsuro yakasasikwa ine dovi
24 Jul, 2014 - 09:07	 2014-07-24T09:12:38+00:00 2014-07-24T09:12:38+00:00 0 Views
Nyama yetsuro yakasasikwa
Chikari, poto kana pani
Masharotsi rwudzi rwehanyanisi dzemhando yepamusoro
Dovi zvipunu zviviri
Cheka nyama muzvidimbu zvakaenzana wosuka matomatisi, masharotsi wocheka muzvidimbu zvidiki.
Gadza chikari, poto kana pani pamoto woisa mvura
uye kana yafashaira suka nyama imwe neimwe
uchiisa imomo wotora matomatisi nemasharotsi woisa, chikwidibira zvombokwata kweawa imwechete. Isa dovi nemunyu mushoma nekuti ukawandisa unokanganisa usavi. Raidza kuti zvaringana here wobura usavi hwako.
Munogona kudya nesadza remhando yamunoda kana manhuchu uye uku kudya kunokurudzirwa.